Motorola na-emelite Moto Z, G Plus 4 na isii ndị ọzọ na gam akporo Oreo | Gam akporosis
Motorola na-emelite Moto Z, Z2 Play, G Plus 4 na ndị ọzọ gaa gam akporo Oreo
Motorola arụsi ọrụ ike na izu ndị a na-akwadebe melite gam akporo Oreo ụfọdụ n'ime ekwentị ha. Na mgbakwunye na ịkwadebe ihe ngosi nke ga-abata na 2018. firmlọ ọrụ ahụ na-eju ugbu a emelite a ngụkọta nke ọhụrụ ụdị ka Android Oreo. N'ụzọ dị otú a, ụlọ ọrụ ahụ chọrọ iji weghachite ezi ihe oyiyi ha nwere banyere mmelite.
Ọ bụ ya mere, ọtụtụ ngwaọrụ gụnyere Moto Z, Z2 Play, G Plus 4 na ndị ọzọ na-amalite imelite gam akporo Oreo.. Yabụ ndị ọrụ nwere otu ekwentị ndị a ga-anụ ụtọ ụdị nke sistemụ arụmọrụ kachasị ọhụrụ.
Fewbọchị ole na ole gara aga Motorola malitere imelite Moto X4. Ugbu a, mgbe oge a gasịrị, ụlọ ọrụ ahụ na-ekwupụta na mmelite ahụ malitere iru ụdị asatọ. Yabụ na ha ga-arụrịrị ọrụ na mmelite na izu ndị na-abịanụ. Kedu ụdị melite gam akporo Oreo?
Na mgbakwunye na Moto X4 ndị a kpọtụrụ aha, ndị ọzọ Motorola ngwaọrụ nke ga-akwalite gam akporo Oreo bụ:
N'ime ndepụta anyị hụrụ ntakịrị ihe niile. Ebe ọ bụ na enwere ekwentị ndị ewepụtara na 2016 na 2017. Na mgbakwunye, enwere ụdị dị elu na etiti. Ya mere, ụlọ ọrụ ahụ ahọrọla ọtụtụ na mmelite a. Ka i si hụ, usoro E ahapụla ndepụta ahụ.
Ọ bụrụ n’inwere ekwentị ọ bụla ga - anụ ụtọ mmelite ahụ, ị ​​nwere ike gaa na ntọala ma jiri aka chọọ mmelite ahụ. Enwere ike ịnweworị ndị ọrụ nwere ike ịnụ ụtọ ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ ga-abụ ụbọchị ole na ole.
Na mgbakwunye na mmelite na gam akporo Oreo ha ewebata December patch patch. Iji kpuchido ndị ọrụ megide egwu dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Motorola na-emelite Moto Z, Z2 Play, G Plus 4 na ndị ọzọ gaa gam akporo Oreo
Enweghị ihe ọ bụla iji melite G4 Play? Ya mere weir
Gam akporo Oreo mechara gafere 1% nkuchi
Gam akporo P ga-agụnye ọrụ ala iji dekọọ oku